Deg Deg:Dawlada Somalia Ciidan Xoogan Soo Dhoobtay Daljirka Dahson, – KHAATUMO NEWS
Waxaa muuqata in xaaladdu ay sii adkaanayso, banàanbixii lagu heshiiyay in dajirka Dahsoon ka dhaco Sabtida ayaa shaki wayn ku imaanayaa.
Maanta oo aan lug ku soo maray Fagaaraha lagu balansan yahay ee Daljirka Dahsoon waxaa ay indhahaygu qabteen ciidamo hubaysan oo xiray wadada muhiimka ah ee ka timaada dhanka Hotelkii hore ee Jubba soona aada dhanka Daljirka Dahsoon.
Inkasta oo socodka dadku Furan yahay haddana wax gaadiid ah oo mari kara ma jiro, dadku waxaa u socdaan raxan raxan, ma garan karo in ay yihiin ciidamo sugaya amniga banaanbaxa barrito iyo in ay ka sii hortagayaan dad bustahooda iyo biyahooda sii dhigta goobta banaanbuxu ka dhacayo.
Waxaa kale oo aan baaritaan ku sameeyay qoraal digniin amni ah oo ilaa shalay la wareejinayay oo la sheegay in uu UNka ama beesha caalamka ka soobaxay, dhamaan qaanadaha ay ku soo qoraan UNka, Maraykanka iyo Midawga Yurib kuma arkin wax digniin amni ah oo arintaas la xiriirta.
Si kastaba ha noqotee, Waxaa laga cabsi qabaa in banaanbaxa barrito uu la mid noqdo kii 19 kii bishaan oo kale, maadaama dawladda uu hogaamiyo Madaxwayne Maxamed C/laahi Farmaajo iyo mucaaradku ku kala tageen shirkii xalay.
Sidoo kale dadka abaabulaya banaanbaxa ee la shaqaynaya Musharixiinta waxaa ay ku leeyihiin banaanbuxu waxaa uu saamayn caalami ah yeelan karaa marka ay dawladdu isku daydo in ay hor istaagto, hadii haddaba aanu ilaa caawa soo baxay qoraal lagu cadaynayo in aan wax carqalad ah jiro doonin, shaki kuma jiro in dhaqa rasaasta meelaha qaar laga maqli doono.
Previous Post: Tirada Maxaabiista Jeelka Boosaaso Lagala Baxay
Next Post: Deg Deg Daawo:Deni Oo Ku labisan Tuute ayaa Gaadhay Boosaas